Al-Shabaab Oo Sheegatay Qaraxii Lala Beegsaday Hotel Muna Ee Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Al-Shabaab Oo Sheegatay Qaraxii Lala Beegsaday Hotel Muna Ee Muqdisho
Al-Shabaab Oo Sheegatay Qaraxii Lala Beegsaday Hotel Muna Ee Muqdisho
Xarakadda Al-Shabaab ayaa ka hadashay qarax ismidaamin ah oo saaka lala beegsaday mid kamid ah hoteelada ku yaalla magaaladda Muqdisho oo ay deganayeen Xildhibaano iyo masuuliyin ka tirsan Dawladda Federaalka.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheikh Cali Dheere oo shir jiraa’id ku qabtay magaaladda Muqdisho saacado kadib markii uu qaraxu dhacay ayaa sheegay in qaraxaas ay fuliyeen guutada Kumaandooska ee Al-Shabaab,isla markaasna ay la beegsadeen hoteelka oo u sheegay in ay deganayeen Xildhibaano iyo Wasiiro.
â€¦Maantey rag ka tirsan xarakada al-shabaab kuwaas oo ahaa kumandooska xarakada, ayaa fuliyey hawlgal culus, waxaana ay qarax la beegsadeen Hotel ay si weyn u camireen kuwa xildhibaanada isku sheega waxaana halkaas ku halaagsamay qaar badan oo kamid xildhibaano ku sheegiâ€¦.â€ ayuu yiri Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere).
Afhayeenka al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegay dadka ay laayeen in ay ka mid ahaayeen qurbo joog ka timid dibadaha kuwaas oo uu sheegay in ay dalka ugu soo laabteen sidii ay muslimiinta u dhibaateyn lahaayeen!!.
Cali Dheere ayaa sidoo kale amaan iyo duco u jeediyey kooxdii fulisey qaraxii Hotel Muna, waxaana uu sheegay in ay sii laba laabayaan qaraxyada iyo dagaalada ay wadaan
Wuxuu intaas ku daray in khasaaro badan uu ka dhashey weerarkaas isla markaasna mahadcelin gaar ah ujeediyey dadkii fuliyey.
Qaraxii ka dhacay Hoteel Muna ee ku yaalla degmada Xamar Weyne ayaa la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ilaa iyo hadda ka dhashey,inkastoo wararku ay sheegaayan in ay ku dhinteen Xildhibaano iyo dad kale oo hoteelka deganaa.